Su'aal hi All
1 1 sano ka hor bisha #1006 by cunno 37
Hada waxaan ahay Chris oo ka yimid Blackpool, ayaa ahaa duulimaad muddo sanado ah. Waxay billaabeen fs98 waxayna ku soo baxeen dhammaan xabsiyada ilaa iyo markii la sameeyay. Ugu dambeyntii waxaa loo beddelay FSX markii aan helnay kombuyuutar cusub oo awood u leh inuu si habboon u ordo. Ku raaxeyso inta badan duulimaadyada gaaban maadaama aanan haysan waqti dheer. Goobtan ayaa raadinaysa dhirta diyaaradaha aan duuliyeyaasha laheyn iyo sida sahlan isticmaalka hadda ee liiska ugu caansan.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.182